Wararka - Waqooyiga Ameerika ee PCB Warshadaha ayaa Iibinaya 1 Boqolkiiba Nofeembar
Iibinta Waxsoosaarka Waqooyiga Ameerika ee PCB ayaa kor u kacay boqolkiiba 1 bishii Nofeembar
IPC waxay ku dhawaaqday natiijooyinka Noofambar 2020 barnaamijkeeda tirakoobka ee Waqooyiga Ameerika (PCB). Qiyaasta buug-ilaa-biilku waa 1.05.
Wadarta shixnadaha PCB Waqooyiga Ameerika bishii Nofeembar 2020 waxay ahaayeen boqolkiiba 1.0 marka loo barbardhigo isla bishii la soo dhaafay. Marka la barbardhigo bishii ka horreysay, rarka Noofambar wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 2.5.
Diiwangelinta PCB bishii Nofeembar waxay kor u kacday 17.1 boqolkiiba sannad-sannadeedka waxayna kordhisay boqolkiiba 13.6 bishii ka horreysay.
Shixnadaha PCB iyo amarradu waxay sii ahaanayaan kuwo xoogaa isbeddelaya laakiin waxay ku sii socdaan la jaanqaadka isbeddellada dhawaanahan, "ayuu yiri Shawn DuBravac, oo ah madaxa dhaqaalaha ee IPC. In kasta oo shixnadaha waxyar ka hooseeyeen celceliskii dhowaa, haddana amarrada ayaa ka sarreeya celceliskooda waxayna 17 boqolkiiba ka sarreeyaan sanad ka hor.
Xog Faahfaahsan Oo La Heli Karo
Shirkadaha kaqeyb gala Barnaamijka Tirakoobka Waqooyiga Ameerika ee PCB ee IPC-da waxay helaan marin faahfaahsan oo ku saabsan PCB adag iyo iibinta wareegga wareegga ah iyo amarrada, oo ay kujiraan saamiga buug-ilaa-biil adag oo adag, isbeddellada koritaanka ee noocyada wax soo saarka iyo heerarka shirkadda, dalbashada noocyada , kororka iibka ee suuqyada militariga iyo caafimaadka, iyo xogta kale ee waqtiga ku habboon.
Saamiga buug-ilaa-biilka waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo loo qaybinayo qiimaha amarrada la xareeyay seddexdii bilood ee la soo dhaafay iyadoo la qiimeynayo qiimaha iibka ee lagu dalbaday isla muddadaas shirkadaha ka soo jeeda saamiga sahaminta IPC. Qiyaasta wax ka badan 1.00 waxay soo jeedineysaa in baahida hadda jirta ay ka horreyso bixinta, taas oo tilmaame wanaagsan u ah koritaanka iibka saddexda illaa laba iyo tobanka bilood ee soo socda. Saamiga ka yar 1.00 wuxuu muujinayaa gadaal.
Heerarka kobaca Sannad-sannadka iyo sannad-ka-dambe waxay bixiyaan aragtida ugu macnaha badan ee koritaanka warshadaha. Isbarbardhiga bil-bil-bil waa in lagu sameeyaa taxaddar maadaama ay ka tarjumayaan saamaynta xilliyeed iyo isbeddellada muddada-gaaban. Sababtoo ah ballansashada waxay u egtahay inay ka xasilloon tahay shixnadaha, isbeddelada saamiga buug-ka-bil bil illaa bil waxaa laga yaabaa inaysan muhiim ahayn ilaa ay u muuqato isbeddel ka badan saddex bilood oo isku xiga. Waxa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo isbeddelada ku saabsan ballansashada iyo rarka intaba si loo fahmo waxa keenaya isbeddelka ku yimaada saamiga buug-ilaa-biilka.